Chaguipatrulla: Ukuhlangula, simahla okwexeshana | IPhone iindaba
Chagupatrol: Kuhlangulo, simahla okwexeshana
Kwakhona namhlanje sithetha ngesicelo esitsha iba simahla okwexeshana. Izolo besithetha ngomdlalo LIimoto zikaGqirha Panda, Umdlalo omnandi wabancinci ekhaya. Ngeli xesha sithetha ngesinye isicelo esincinci sendlu: Chaguipatrulla Ukuhlangula.
Ngalo mdlalo siza kuhamba ngomkhondo noWilson, uBrewster, uKoko kunye no-chuguero omtsha, intloko yeChiprigada, uJackman, kolu lonwabo lumnandi lokusebenzisana. Abancinci kuya kufuneka bafunde ibali, bathathe iimvavanyo kwaye basebenzise izakhono zabo ukufumana iimedali ezivela eChaguipatrulla.
Chaguipatrulla Al Rescate ujonge kwaye uzive, ngaphaya kwemigama, yencwadi yokwenyani. Intloko yeChagipapatrol iya kufunda ibali ngaphambi kokuguqula iphepha kunye bonisa indawo kwi-3D. Lo mdlalo ulungele loo mvakwemini apho singenakuphuma nonyana wethu kwaye sifuna ukuba sonwabe.
1 Ezona mpawu ziphambili zomdlalo Chaguipapatrol kuHlangulo
2 Iinkcukacha zomdlalo
Ezona mpawu ziphambili zomdlalo Chaguipapatrol kuHlangulo
Isicelo esisemthethweni se «Chaguipatrulla: Ukuhlangula!», Isiqendu esigcweleyo.
Ibandakanya iiChugueros ezintsha zikaChuggington: UJackman, uZack noHanzo.
Yonwabela kwimilinganiselo emithathu, kufana nencwadi yokwenyani.
Amaphepha angama-21 amabali anomdla, oopopayi kunye nemifanekiso.
Imiboniso elishumi-ntathu enemidlalo yokusebenzisana kunye nemisebenzi.
Ukuqiniswa okuqinisekileyo kokufunda nokudlala kunye. Zuza indondo yeChagupatrol ekupheleni komdlalo ngamnye.
Ndifundele, Funda kum, kwaye udlale iimowudi.
Yenziwe ngesiNgesi, isiFrentshi, isiJamani, iSpanish, isiTaliyane nesiPolish.
Kuxelwe kulwimi ngalunye ngabadlali abaziingcali.
Ngomculo omnandi wesandi kunye nemithwalo yesandi esimangalisayo.
Yithi ubusuku obuhle kubaqeqeshi bakho obathandayo: Wilson, Brewster, kunye noKoko.
Uhlaziyo lokugqibela: 24-07-2015
Ukuphuhliswa kwabantwana be ukuya kuthi ga kwiminyaka emi-5.
Ukuhambelana: Ifuna i-iOS 6.0 okanye kamva kwaye iyahambelana ne-iPhone, i-iPad kunye ne-iPod Touch.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Chagupatrol: Kuhlangulo, simahla okwexeshana
Umlawuli we-FBI uxwayisa ukuba imfazwe ne-Apple ayikapheli
I-iPhone 7: yonke into esiyaziyo ukuza kuthi ga ngoku